Muxuu ku dambeeyay heshiiskii Ahlusunna? - BBC Somali
Muxuu ku dambeeyay heshiiskii Ahlusunna?
Image caption Shariif Xasan Shiikh Aadan
Shiikh Maxamuud Shiikh Xasan, oo ah Hoggaamiye Ahlu Sunna ah wuxuu sheegay in uu fashilmay heshiiskii ay hore u galeen Ahlu Sunna iyo Dowladda TFG.
Heshiiskaasi wuxuu ka fashilmay ayuu yiri dhinaca dowladda, oo uu ku eedeeyay in ay talo ka qaadaneysa shakhsiyaad dantooda ka dhex arkay, Qabqablayaal dagaal iyo Ajnebi.
Waxaa uu ka gaabsaday in uu sheego magacyada shakhsiyaadka uu ka cabanayo in ay fashiliyeen heshiiska.
Shiikh Maxamuud bishii May ayuu sheegay in heshiisku fashilmay, laakiin waxa cusub waxay yihiin ayuu yiri, in dowladdu iyada oo heshiiskii nuxurkiisii dishay, ay haddana iska dhigeyso ina ay fulineyso.
Xogtu waxay tahay ayuu yiri in TFG ay damacsan tahay in ay magacawdo shakhsiyaad ay ku tilmaameyso in ay yihiin Ahlu Sunna.
Markii aan Addis Ababa wada xaajoodka u fadhinnay ayuu yiri, raggii dowladda matalayay oo magaceeda nagula xaajoonayay, ayaa hadda lagu magacaabayaa in ay ka tirsan yihiin Ahlu Sunna, oo iyagu ay matalaan.
Waan la yaabban nahay.
Mar la weydiiyay waxa dhacaya haddii Shiikh Xeefow oo heshiiskii saxiixay uu raalli ka yahay dadka la magacaabayo, ama rag kale oo Ahlu Sunna ah ay ka qeyb galaan dowladda, Shiikh Maxamuud wuxuu ku jawaabay in Ahlu Sunna uu go'aankeedu ku xiran yahay wada tashi.
Ma ahan wax shakhsi ama koox ay ku daneysan karaan, ayuu raaciyay.
Wasiir iyo laba ama ka badan waa wax dadka lagu jaha wareerinayo.
Heshiiska nuxurkiisii oo dhan waa laga tegey, sidaa darteedna wuu dhintay.
Ahlu Sunna iyo dowladdu waxay galeen heshiis lagu saxiixay Addis Ababa.
Dhinaca dowladda ragga uga qeyb galay waxaa ka mid ah, Shariif Xasan Shiikh Adan, oo markaa ka dib loo doortay Guddoomiyaha Baarlamaanka, Cabdirisaaq Juriile oo ah Wasiirka Isgaarsiinta iyo Mustaf Dhuxulow oo ah la Taliyaha siyaasadda ee Madaxweynaha.
Image caption Maxamed Yusuf Xeefoow
Shiikh Maxamuud iyo Raiisal Wasaare Cumar Cabdirashiid iyaguna saxiixa ayaa goob joog ka ahaayeen.
Heshiisku waxyaabaha uu qorayay waxaa ka mid ahaa in ciidanka labada dhinac la mideeyo xilalka dowladda oo ay ka mid yihiin, Wasiirro, Taliska ciidanka iyo danjirayaal intaba la wadaago.
Ilaa iyo markii heshiiskaa la gaaray, Shabaab iyo Xisbu Islaam oo ah labada kooxood ee loo heshiiyay, degaanno hor leh ayay dagaal ku qabsadeen.
Shiikh Maxamuud waxaa uu ku tilmaamay in Ahlu Sunna ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda.
Wuxuu yiri Ahlu Sunna kooxahaas dadnimadooda lama dirirsana, laakiin waxay la dirirsan yiiin firkirka ay wadaan oo uu ku tilmaamay Takfiiri.
Fikrkaasi waa mid ummadda dhiiggeeda lagu banneysanayo, ayuu yiri Sh. Maxamud.
Wuxuuna ku daray in umadda dhaqankeedii iyo xurmadeeda uu ka soo horjeedo fikirka Takfiirku.
Dagaalka Ahlu Sunna ay kula jirto fikirkaas wey sii wadi doontaa ayuu yuru, wuxuuse ku tilmaamay in dowladda oo uu ka filayay in ay isu kaashadaan, ay kaalinteedii gabtay.
Saameynta fashilka heshiiska
Heshiiska oo ilaa iyo hadda aan waxba ka fulin, haddii uu si buuxda u burburo, wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhinacyada koofurta iyo bartamaha Soomaaliya ku dagaallamaya oo dhan.
Dhibka ugu weyni wuxuu soo gaari doonaa shacabka.
Laakiin dowladda iyo Ahlu Sunna, labadaba wuxuu wiiqi karaa awoodda ay isaga caabbin lahaayeen dhinacyada ka soo horjeeda.
Laakiin waxaa iyaduna suurta gal ah, in Shabaab iyo Xisbu Islaam, oo ay duruufuhu isku khasbayaan, laakiin aan siku meel wax u wadin, ay fursad u siiso in ay is tijaabiyaan.